Tranok'asa miandry ny lakozia
Ny vahaolana amin'ny olana amin'ny trondro kely dia ny fampiasana ny fitaovana fanodinana fitaovana ary ny fahafahana mametraka mora foana ilay tapa raha ilaina. Ny seza ho an'ny lakozia kely dia mety ho mora amin'ny rano mikambana, fa ao amin'ny endrika efa misy azy dia feno trano feno hatsaram-panahy feno.
Fangatahana amin'ny famolavolana maoderina: seza ho an'ny lakozia
Ho fahatsiarovana ireo mpitondratena maro, ny tranokely fisakafoana dia miseho ho toy ny vidiny mora ary mety ho an'ny balkon na ho an'ny dacha. Na izany aza, amin'izao fotoana izao ity niche ity dia tena nahavita fahombiazana tamin'ny modely tena mahomby sy mahazatra, izay tena nahomby tamin'ny fifaninanana tamin'ny fivelomana mahazatra.
Fandefasana plastika maoderina, ary seza manokana indrindra, manana tombony maro:
Ny tranokely dia tena maharitra, fa maivana kely ary tsy misy olana ny mitondra azy ao anaty fiara ny fiara na isan'andro mba hialana amin'ny toeran'ny toerana ao an-dakozia;
Raha mividy fivarotana tsara ianao ary mifidy vokatra tsara dia tsara, tsy hisy mihitsy ny olana amin'ny tongotra tapaka na ny famafazana tsy mety;
Ny kitapo nofongarina teo aloha dia natao tamin'ny endrika tsotra sy marefo, ary amin'izao fotoana izao dia afaka manangona safidy mendrika ho an'ny ati-trano amin'ny fomba rehetra, satria ny mpanamboatra mampiasa fitaovana sy endrika isan-karazany;
ary mazava ho azy fa ny tombony lehibe indrindra amin'ny sezafara mampivelatra ny lakozia dia ny fahafahana mamonjy metatra torimaso mahasoa.
Ny seza mangina, toy ny ambin'ny amboaram-bokatra any ivelany, dia samy hafa ary amin'ny mpanamboatra samihafa dia misy modely ho an'ny endriny nentim-paharazana sy hatramin'ny taloha.
Tranobe fialan-tsakafo kely: inona ny fitaovana tokony aleoko?
Amin'ny lafiny maro dia miankina amin'ny fitaovana sy ny fiarahan'izy ireo ny loko. Misy kitapo mipoitra vita amin'ny plastika, hazo ary metaly. Ny safidy tsirairay dia manana fiantraikany sy fiantraikany.
Ny firafitry ny metaly dia iray amin'ireo maharitra sy malaza indrindra. Matetika ny endriky ny kofehy dia rakotra karbonina na nikela. Io fitaovana io dia mety haharitra mandritra ny taona maro ary hahatohitra ny lanja rehetra. Raha ny fitsipika, ny kofehin'ny metaly dia rakotra vita amin'ny hoditra, misy modely misy seza misy plastika. Na dia ny fanenan-koditra amin'ny rindrina aza, fa ny lakozia dia matetika tsy voafidy noho ny fahasarotan'ny fikarakarana.
Tsy dia malaza loatra ny fivelomana sy ny seza ho an'ny lakozia amin'ny plastika. Aza matahotra fa ho lasa tsy azo ampiasaina ny plastika. Tena fitaovana matanjaka izy io izay ampiasaina am-pahazotoana ho an'ny fanaka, manana endrika mampitolagaga sy fanompoana lava. Ny rafitra mangalatra dia matetika manamafy ary mieritreritra ny antsipiriany kely indrindra. Modely fanofanana vita amin'ny plastika mangarahara amin'ny loko maitso maitso, hazo alemaina na rattan - ireo rehetra ireo dia ho hitanao amin'ny karazan'ny mpamokatra.
Ny efitrano fatoriana ho an'ny trano fandroana avy amin'ny hazo miaraka am-pandriana dia hiditra any amin'ny trano rehetra, satria izy ireo dia manamboatra endrika. Izy ireo dia vita avy amin'ny hazo voajanahary, ary ny OSB amin'ny plywood.
Ahoana ny fomba hanaovana ny hazo avy amin'ny hazo?
Vata mangatsiaka ho an'ny lakozia
Sofa roa ambony
Fialofana amin'ny teknolojia avo lenta
Fiara plastika entrée
Ahoana ny fomba hanamboarana trano fivoarana?
Fanamboarana rindrin'ny tanan'ny tanana
Famaranana ny lavarangana miaraka amin'ny fitomboka
Ny divay dia mamony divay
Kansera lip - soritr'aretina, famantarana voalohany
Prokinetika - lisitry ny zava-mahadomelina
Herintaona taorian'ny nanombohan'ny fifandraisana dia nanamafy ny raharahany tamin'i Andrew Watt i Rita Ora
Ahoana ny fampandroana ny atin'akanjo ao an-trano?
Bibidia buckwheat - fomba vaovao niavaka tamin'ny fihinanana sakafo tsotra
Fanosorana trano iray amin'ny Halloween
Sandwich mafana ao amin'ny mikrô
Manamboatra efitrano fandraisam-bahiny - hevitra tsara indrindra momba ny fandravonana anatiny
Veroshpilakton - famantarana ny fampiasana
Ahoana no hanasitranana ny cystitis indray mandeha?
Nahoana no nanonofy ny zazalahy iray?